बैंकहरुलाई गभर्नरको आग्रह / ऋणको ब्याज घटाऊ | Business and Economy of Nepal
बैंकहरुलाई गभर्नरको आग्रह / ऋणको ब्याज घटाऊ
Posted on December 5, 2011 by Babukrishna	बाबुकृष्ण महर्जन, (काठमाडौं)
तरलता प्रशस्त हुँदा पनि ऋणमा ब्याज दर नघटाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाई ऋणको ब्याज घटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। विगतमा तरलता अभाव हुँदा ऋणको ब्याज बढाइएकाले तरलता सहज भएको बेला ऋणको ब्याज घटाएर नै तरलता बढी भएको आभास ग्राहकहरुलाई दिलाउनुपर्ने गभर्नर डा. खतिवडाले पत्रकार भेटघाटमा बताउनुभएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको शुरुआतसँगै बैंकहरुमा तरलताको स्थितिमा सुधार आएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असार महिनायता वाणिज्य बैंकहरुसँग मात्र अहिले ४५ अर्ब रुपियाँको तरलता विद्यमान रहेको छ। कर्जा निक्षेप अनुपातको ८० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाका कारण बैंकले नयाँ कर्जा बढाइहाल्ने स्थिति भने छैन। हाल विद्यमान कर्जामै पनि ब्याज दर परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उद्योगी व्यवसायीहरुले बारम्बार उठाउन थालेका छन्। अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भएका कारण रेमिट्यान्सको ओइरो लागेको एवम् भुक्तानी सन्तुलन करिब ३४ अर्बले सकारात्मक भएका कारण पनि बैंकमा तरलता प्रशस्त रहेको छ। प्रशस्त तरलता भएकाले ब्याजदरमा पनि पहिले बढेको जसरी नै ऋणको ब्याजदर घट्नुपर्ने ऋणी व्यवसायीको माग रहेको छ।
बैंकहरुले बढी नाफा कमाउने लोभमा अन्धाधुन्ध रुपमा स्पेकुलेटिभ घरजग्गा व्यवसायीलाई कर्जा प्रवाह गरेका कारण नै बैंकहरु समस्यामा परेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए। तुलनात्मक रुपमा आफ्नै प्रयोजनका लागि गएको घरजग्गा ऋणमा भने समस्या देखिएको छैन। -उनले अगाडि थपे।
स्पेकुलेटिभ घरजग्गा व्यवसायीले लिएको ऋण घरजग्गा क्षेत्र ओरालोमा लागेपछि समस्यामा परेका कारण समग्र बैकिङ क्षेत्रमा नै समस्या छाएको हो। घरजग्गा क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाहित गरेर सो कर्जा विस्तारै खराब कर्जामा परिणत हुन थालेपछि अन्य कर्जामा पनि ब्याज बढाउन थालेको देखिन्छ। बैंकहरुले आफ्नो अदूरदर्शिताको कारण सिर्जना भएको भार सोझा ऋणीहरुको टाउकामा थोपर्न नहुने राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए।
करिब दुई वर्ष अघि बैंकहरुले तरलताको चरम अभाव भएको भन्दै ६ महिनामा नै ३ प्रतिशतसम्म ऋणको व्याज दरमा वृद्धि गरेका थिए। व्याज दर वृद्धि गर्दा निक्षेप वृद्धि हुन नसक्नु अन्तर बैंक व्याज दर बढेर दोहोरो अंकमा पुगेका लगायतका कारणहरु पेश गरेर ग्राहकलाई सफाइ दिने गरेका थिए। बैंकले निक्षेप आकर्षित गर्न उक्त समयमा निक्षेपको व्याज दरमा पनि वृद्धि गरेका थिए। निक्षेप संकलन लागतमा समेत वृद्धि भएको बहानामा पनि बैंकले ऋणको व्याज दरमा वृद्धि गरेका थिए। सीमित आयस्रोत योजना देखाएर ऋण लिने उद्योगी व्यवसायी विगत २-३ वर्षदेखि बैंकले एकतर्फी रुपमा वृद्धि गरेको चर्को व्याजका कारण पीडित बनेका छन्। बैंकले व्याज दरमा वृद्धि गर्दा आफ्नो उद्योग व्यवसायको लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा समेत ड्डहास पुगेको ती व्यवसायीले बताए। व्यवसायीले बैंकलाई दिएको योजना अनुसार नै आम्दानी गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थप व्याज वृद्धिले झन समस्या चर्काएको अर्का एक व्यवसायीको भनाई छ।
व्याज बढाउदा ६ महिनामा ३ प्रतिशत व्याज बढाउने बैंकले तरलता संकट समाधान भएको अवस्थामा पनि सोही अनुसार घटाउनुपर्छ।ती व्यवसायीले आक्रोस पोखेविगत ६ महिनादेखि बैंकमा तरलता बढी भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ तर कर्जामा व्याज दर भने एकाध बैंकले शुन्य दशमलब २५ प्रतिशतले मात्र घटाएको सुनिएको छ। यो त भएन नि।
नेपालले हालै भारतसँग लगानी प्रबद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता बीपा र दोहोरो कर हटाउने सम्बन्धी सम्झौता डीटीएए गरेको छ। यी सम्झौताले मात्र नेपालमा लगानी मैत्री वातावरण बन्नेमा उद्योगी व्यवसायीले शंका व्यक्त गरेका छन्। लगानी मैत्री वातावरण बनाउन लगानी मैत्री नीतिको अतिरिक्त पर्याप्त ऊर्जा शक्ति तथा कामदार र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्धका साथै उचित व्याज दरमा वित्तीय साधनमा पहुच हुनु अनिवार्य रहन्छ। नेपालमा भने दैनिक १५ घण्टाको लोडसेडिध्र श्रम समस्याको कारण भएका उद्योगधन्दाहरु बन्द भइरहेको एवम् बैंकहरुले कर्जामा लगाउने व्याज दर पनि अत्यन्त महंगो रहेका कारण लगानी मैत्री वातावरणको अभाव नै रहेको छ। भारतलगायत अन्य देशहरुसँग गरेको बीपा तथा डीटीएएको फाइदा उठाउन पनि नेपालले धान्न सकिने व्याज ऋण सुविधा सुमधुर श्रम सम्बन्ध र लोडसेडिध्ररहित बिजुलीको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य भएको छ।
Filed under: Bank and Finance Tagged: | Decrease Loan Interest, Governer Dr. Yubaraj Khatiwada, Governor requested to decrease Loan interest, Nepal Rastra Bank	« Lower insurance premium: NBA जलविद्युत आयोजनालाई १० प्रतिशतमा ऋण »